Douglas Karr | Peeji nke 856 nke 856 | Onye guzobere ya Martech Zone
Ịgụ Oge: 2 nkeji Na ngwụcha izu a gara aga, enwere m ọmarịcha njem azụmahịa / njem onwe m ruo Victoria na Vancouver, British Columbia. M gụsịrị akwụkwọ na High School na Vancouver afọ 20 gara aga ma laghachi na ugboro abụọ. Ọ bụ ihe ịrịba obodo - dị ọcha, mara mma, oge a na ike. M nọrọ ụfọdụ ezigbo enyi m si High School na anyị ọbụna nwetara 9 oghere nke golf na. Ọ bụ a na-akpali akpali izu ụka! (Na azụmahịa gara nke ọma, oke!) Achọpụtara m
Wenezde, August 10, 2005 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Ịgụ Oge: <1 nkeji Anọ m na-achọ ịgbaso ọkwa m Open = Growth ruo nwa oge. Edere na post ahụ bụ ohere nke ihe ịga nke ọma mgbe ndị folks na-etinye uche na otu esi agwakọta azịza ha na azịza ndị ọzọ. Enwere akụkụ tụgharịa na nke a, nke ahụ bụ maka ụlọ ọrụ ịbelata arụmọrụ nke ngwọta ha ruo isi nke otu esi eji ha. Gbakwunye plethora nke ngwaahịa, ọrụ, na atụmatụ nwere ike ịdị egwu. Ndị mmemme na-akpọ ya
Ịgụ Oge: <1 nkeji E nwere ndị mmadụ n'ofe mba ahụ na-enyo ume ọ hụrụ n'ịhụ Nnyocha Shuttle na-aga nke ọma. Enwere ndị kwenyere na ọtụtụ ijeri dollar ejiri rụọ ọrụ na mbara igwe bụ naanị nnukwu ego. Enweghị m ike ikwenye karịa. Dị ka ọ dị na mbido ọhụụ a, isetịpụ ebumnuche ndị agaghị ekwe omume inweta bụ ihe na-akpali anyị ime ihe ọhụrụ na ọganihu. Mmemme mbara igwe bụ otu n’ime mmemme ndị ahụ
Ịgụ Oge: 2 nkeji Na mbido afọ a, mụ na ndị otu NFL NFL gbakọrọ ọnụ iji nyochaa nchekwa data ha na ngwa ahịa email. Ọ bụ nyocha zuru ezu nke ọtụtụ ngwaọrụ dị na ha. Akụkụ ndị m lekwasịrị anya bụ: Ike ijikọ na mpụga azịza Ike iji mezie usoro Mfe iji Azịza nke ụlọ ọrụ site na njikwa akaụntụ na nkwado Isi abụọ ndị a bụ uru maka ọdịnihu. Achọrọ m ijide n'aka na nzukọ ahụ
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ige redio na ụzọ m na-arụ ọrụ bụ oge dị jụụ nye m. Na agbanyeghị ịzụ ahịa, abụ m onye na-enwe ọ camụ n'ogige. Mbugharị okporo ụzọ? Enweghị nsogbu… ndị DJ m ga-adọta m ma bido ụbọchị. Ruo ụnyaahụ…. Apụghị m ịkwụsị iche banyere ya. Ana m ege ọmarịcha mgbasa ozi na redio banyere nwa okorobịa anaghị atọ ụtọ ụtọ kọfị. Ihe ndi ozo - Ugwu Ugwu. Ugwu Ugwu? Ugwu Mountain!
← Nke gara aga 1 ... 855 856
Page 856 nke 856